January 23, 2021 - ApannPyay Media
ရွှေထက်ကို အဖိုးတန်တဲ့ စပျစ်သီးရဲ့အစေ့
January 23, 2021 by ApannPyay Media
ရွှေထက်ကို အဖိုးတန်တဲ့ စပျစ်သီးရဲ့အစေ့ လူအများစု မစားဖြစ်ပဲ ထွေးထုတ်နေမိတဲဲ့စပျစ်သီးအစေ့လေးတွေအကြောင်း စပျစ်သီး အစေ့ရဲ့ အရသာက ခါးသက်သက် စားရတာကလည်း မာဆတ်ဆတ်နဲ့ဆိုတော့ စပျစ်သီးစားတိုင်း ထွေးထုတ်ပစ် လိုက်တာ များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေ မသိတဲ့ အချက် တစ်ခုက စပျစ်သီးက သူရဲဲ့အစွမ်းသတ္တိတွေ အကုန်လုံးကို အစေ့ထဲမှာ သိမ်းဆည်း ထားတာပါ။ စပျစ်သီး အစေ့ထဲ မှာပါတဲ့ အစွမ်းသတ္တိ တွေကိုသာ သိခဲ့မယ်ဆိုရင် အရင်က ထွေးထုတ် ခဲ့မိတဲ့ စပျစ်သီးစေ့လေးတွေကို နှမြောမိမှာ သေချာ ပါတယ် ။ နိုင်ငံတကာ မှာလည်း စပျစ်သီးအစေ့ရဲ့ အဆီအနှစ်ကို ထုတ်ယူပြီး ဆေးဝါး အဖြစ် ထုတ်လုပ် ရောင်းချ နေတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ် ။ စပျစ်သီး အစေ့ထဲမှာ … Read more
ဘာသာခြားတွေက မင်းတို့ရဲ့ ထေရ၀ဒါက ဒါမျိုးကြီးလားလို့ ပြောဆိုလာရင်
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ထေရဝါဒလမ်းစဉ်နဲ့ မကိုက်ညီတာတွေ အတော်လေးကြီးထွား များပြားလာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စစ်မှန်တဲ့ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်တွေရင်ထဲရောက်ရှိ ပြန့်ပွားရေးအတွက် ထေရဝါဒနှင့် မြန်မာပြည်ဆိုပြီး မိမိသိရှိတာလေးတွေ မျှဝေပေးနေတာ အပိုင်း ၃ ထိရောက်လာပြီ။ တစ်ယောက်သိသွားလည်း တစ်ယောက်ပေါ့ဆိုပြီး ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပေးနေတာပါ။ တစ်ဖက်က ဒီလိုအသိပညာပေးတာတွေ လုပ်သလို တစ်ဖက်ကလည်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းမှုတွေလုပ်ပေးရမှာပါ။ ရဟန်း ရှင် လူ သုံးဦးစလုံးမှာတာဝန်ရှိပါတယ်။ မနေ့က ရန်ကုန်မှာ မြနန်းနွယ်မွေးနေ့ပွဲတဲ့လုပ်ကြတယ်။ အယူလွဲမှား ဥာဏ်နည်းပါးတဲ့ လူတွေသူ့ဟာသူလုပ်တာ ဘာမှမပြောလိုပေမယ့် ထိုအထဲမှာ ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ သားတော် သမီးတော်တွေဖြစ်တဲ့ သင်္ကန်း၀တ် ရဟန်းတွေ၊ မယ်သီလရှင်တွေ ယောဂီတွေ ပါ၀င်နေတာကိုတော့ အင်မတန် စိတ်ပျက်မိတယ်။ မသိရင်ထေရဝါဒထဲမှာ မြနန်းနွယ်ကပါသလိုလို၊ အားပေးလက်ခံသလိုလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာသာခြားတွေက မင်းတို့ရဲ့ … Read more
(၃) လအတွင်း ဆီးချိုရောဂါ လုံးဝပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးက အဖွားဒေါ်ဝင်း
(၃) လအတွင်း ဆီးချိုရောဂါ လုံးဝပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းကို ပြောပြခဲ့တဲ့ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးက အဖွားဒေါ်ဝင်း မီးကွင်း ဂမုန်းပင် အရွက်ကို ကျိုသောက်ရုံဖြင့် ၃လ အကြာမှာ ဆီးချိုရောဂါကို လုံးဝ (100% ) ပျောက်ကင်းကြောင်း ဝမ်းသာအားရ ပြောပြနေသော ကရင်ပြည်နယ်. ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့က အဖွားဒေါ်ဝင်း ဆေးစွမ်းထက်သော မီးကွင်း ဂမုန်းပင် မီးကွင်းဂမုန်းပင်သည် အလွန်ပင်ဆေးဖက်ဝင်သော အဖိုးတန်အပင်တစ်မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပင်ကို နေရာတိုင်းမှာ လွယ်ကူစွာ မြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များအတွက် မီးကွင်းဂမုန်း ၉ ရွက်ခန့်ကိုသံပုရာသီးတခြမ်းဆားအနည်းငယ်အိုးတလုံးထဲတွင် ရေမတ်ခွက်တစ်ခွက်ထည့်၍သုံးခွက်တစ်ခွက်ကျန်အောင်ပြုပ်၍တစ်နေ့တစ်ခွက်ရ ရက် သို့မဟုတ် ၁၀ ရက်ခန့်သောက်သုံးရုံပါပဲ ဆီးချိုရောဂါ ခံစားနေရသော ဝေဒနာအရှင်အပေါင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေလိုသောဆန္ဒဖြင့် Credit~ မာံသုခ (၃) လအတြင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါ လုံးဝေပ်ာက္ကင္းခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းကို … Read more
မျက်နှာအသားအရေ ညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရင်
မျက်နှာအသားအရေ ညစ်ညစ်ကြီးဖြစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေရင် မျက်နှာအသားအရေ ညစ်နေလို့ စိတ်ညစ်နေပြီလား…? မျက်နှာအသားအရေ ညစ်ညစ်ကြီးဖြစ် နေလို့စိတ်ပူနေတဲ့ ပျိုမေတို့အတွက် အညစ်အကြေးတွေ အကုန်ပြောင်စင်ပြီး ခဏအတွင်း ဖြူဖွေးလာမယ့် DIY homemade ပေါင်းတင်နည်းလေး ပြောပြပေးပါမယ်နော် …။ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့… – ကြက်ဥ တစ်လုံး – သံပုရာသီး တစ်လုံး – Tissue လိပ်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ပထမဦးဆုံး ကြက်ဥ အကာနဲ့ အနှစ်ကို ခွဲထုတ်ပါမယ်။ အကာရည်ကိုပဲယူပြီး ခွက်ထဲထည့်ပြီး မွှေပေးပါ …။ ပြီးရင်သံပုရာ သီးကိုညစ်ပြီး မွှေထားတဲ့ ကြက်ဥအကာရည်နဲ့ ရောပြီး ပြန်မွှေပေးပါ …။ မွှေထားတဲ့အနှစ်ရည်ကိုမျက်နှာပေါ်အနှံ သုပ်လိမ်းပေးပါပြီးရင် မျက်နှာပေါ်ကိုTissue ဖတ်နဲ့အပြည့်ကပ်ပေးပြီး ၁၅မိနစ်ခန့် လောက်ခြောက်အောင် ထားထား … Read more
ဥယျဉ်ခြံမြေ ရွာမြေတို့မှာ ၂ထပ်တိုက်လောက်ထိ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်လိုလျှင်
ဥယျဉ်ခြံမြေ ရွာမြေတို့မှာ ၂ထပ်တိုက်လောက်ထိ ဆောက်လုပ်ခွင့်တင်လိုလျှင် ရွာမြေ၊ ဥယျဉ်ခြံမြေတွေမှာ ဆောက်လုပ်ခွင့် နေထိုင်ခွင့် ရှိနိုင်ပါသလား မေး။ ။ရွာမြေ၊ဥယျာဉ်ခြံမြေဝယ်ရင် တရားဝင်ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်သလဲ။ စည်ပင်မှာ အိမ်ဆောက်ခွင့်တင်လို့ရပါသလား။ ဂရန်လျှောက်နိုင်ပါသလား။ ဖြေ။ ။ဥယျာဉ်ခြံမြေဆိုတာ ရွာနဲ.ဆက်စပ်နေတဲ့မြေလား၊ ရွာမြေလား ဒါမှမဟုတ် ဥယျာဉ်ခြံမြေပါ၊ လို. မြို.နယ်ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်း ဦးစီးဌာနက G အမှတ်အသားပြပြီး တရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာလား သိဖို.လိုတယ်။ ရွာမြေ ဒါမှမဟုတ်ရွာနဲ.ဆက်စပ်မြေတို.ကို ဝယ်မယ်ဆိုရင် နှစ်ဦးသဘောတူအိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ်နဲ. ဝယ်လို့ရတယ်။ စာချုပ်ရုံးမှာသွားပြီး မှတ်ပုံတင် အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ချုပ်လို့မရပါဘူး။ အကြောင်းက တရားဝင်လွှဲပြောင်းနိုင်အောင် ရောင်းသူအမည်ပေါက် ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ပါမစ်မြေ၊ ဂရန်မြေ အထောက်အထားမရှိသေးလို့ပါ။ လက်လွှဲလက်ပြောင်းပြုလုပ်ထားကြောင်း သက်သေအနေနဲ. ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရှေ့မှာ ပြုလုပ်ထားသင့်ပါတယ်။ G အမှတ်အသားပြ ဥယျာဉ်ခြံမြေကို အမည်ပေါက်ဆီက တိုက်ရိုက်ဝယ်ရင်တော့ … Read more
မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေကင်းဖို့ဆိုရင်
မျက်နှာပေါ်က အရေးကြောင်းနဲ့ ဝက်ခြံတွေကင်းဖို့ဆိုရင် မျက်နှာပေါ်ကဝက်ခြံနဲ့ အရေးကြောင်းတွေပျောက်ကင်းဖို့ အုန်းဆီ၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါတို့နဲ့ နေ့တိုင်းမျက်နှာသစ်မယ် နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းရေး ပစ္စည်းတွေထဲမှာ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာဟာ အသားအရေ စိုပြေလှပဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံး အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာထက် အသားအရေထိန်းသိမ်းဖို့ သဘာဝမျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာကိုပြုလုပ်လိုက်ရအောင်ပါ။ အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဟာ အသားအရေအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများပြီး သဘာဝပစ္စည်းတွေမို့ အရေပြားပျက်စီးမှာ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ဝက်ခြံ၊ မျက်နှာမှာ အနီစက်ဖြစ်တာ ၊ အမာရွတ်တွေနဲ့ အရေးကြောင်းတွေအပါအဝင် ဆဲလ်အသေတွေကို ဖယ်ရှားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်း မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အုန်းဆီ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာကတော့ သင့်အသားအရေအမျိုးအစားပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ အသားအရေက ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ အသားအရေ (Sensitive Skin) ဆိုရင် အုန်းဆီနဲ့ မှုန့်ဖုတ်ဆိုဒါကို ၂ ချိုး … Read more
စားလို့ကောင်းပြီး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ကဆစ်သီး
စားလို့ကောင်းပြီး ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ကဆစ်သီး ကဆစ်သီး၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ က ဆစ်သီး – ကဆစ်ပင်သည် ဆေးဘက်ဝင်အပင်မျိုးဖြစ်ကာအသီးတွင် အခါးမျိုးနှင့် အချဉ်မျိုးဟုနှစ်မျိုးတွေ့ရပြီး၊ လေပွခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ အသည်းရောင်အသားဝါ၊ သွေးအားနည်းရောဂါ၊ ဆီးဆေးနှင့် အကိုက်အခဲပျောက် ဆေးများဖော်စပ်ရာတွင် သုံးသည်ဟုဆိုကြပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဒေသတချို့တွင် ကဆစ်သီးကို နံနက်စာတွင် ထည့်စားခြင်းဖြင့် အစာချေဖျက်အား ကောင်းစေပြီး၊ အဆာခံကာ အလုပ်ကိုပိုမိုလုပ်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အညာမှာတော့ ယာခင်းထွက် ကဆစ်သီးကို အမျိုးမျိုးပြုလုပ် စားသုံးကြပါတယ်။ ကဆစ်သီး အမှည့်ကို စားလို့ရပါတယ်။ သခွားမွှေးသီးနဲ့ အရသာဆင်ပါတယ်။ကဆစ်သီးကိုတော့ မီးဖုတ်ပြီး ထောင်းစားကြသလို၊ ကဆစ်သီး ငပိချက်ဟာလည်း လူကြိုက်များပါတယ်။ကဆစ်သီးကို ချဉ်ပေါင်ရွက်နဲ့အတူ ချဉ်ရည်ဟင်းချက်စားကြသလို၊ အမဲ၊ ဝက်၊ ကြက်စတဲ့ အသားများနဲ့လည်း ရောချက် စားကြပါတယ်။ကိုယ်တိုင် စားဘူးသူများမှ … Read more
နံနက်စာမှာ ပေါင်မုန့်နဲ့ကြက်ဥ ဘယ်ဟာကပိုကောင်း
နံနက်စာမှာ ပေါင်မုန့်နဲ့ကြက်ဥ ဘယ်ဟာကပိုကောင်း လူစီယာနာပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီများရဲ့ လေ့လာမှုအရ နံနက်စာမှာ ပေါင်မုန့်အကွင်း (၂) ကွင်းစားတဲ့သူတွေထက် ၎င်းပေါင်မုန့် (၂) ကွင်းနဲ့ ကယ်လိုရီတန်ဖိုးချင်းတူတဲ့ ကြက်ဥ (၂) လုံးစားတဲ့လူဟာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျကြောင်း တွေ့ခဲ့ရပါသတဲ့။ နံနက်စာမှာ ကြက်ဥစားသူတွေဟာ ကိုလက်စထရော(လ်) ပမာဏ မတက်စေတဲ့အပြင် ပိုနေတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကိုတောင် ကျသွားပါသတဲ့။ ဒါဟာဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာသိချင်ပါသလား? ကြက်ဥစားတဲ့သူတွေဟာ မနက်စာစားပြီးတဲ့အခါ ဗိုက်ပြည့်သွားတယ်လို့ ခံစားကြရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့လုံး ကယ်လိုရီအနည်းငယ်ကိုသာ စားသုံးတော့လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ crd, Health Digest နံနက္စာမွာ ေပါင္မုန႔္နဲ႔ၾကက္ဥ ဘယ္ဟာကပိုေကာင္း လူစီယာနာျပည္နယ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားရဲ့ ေလ့လာမႈအရ နံနက္စာမွာ ေပါင္မုန႔္အကြင္း (၂) ကြင္းစားတဲ့သူေတြထက္ ၎ေပါင္မုန႔္ (၂) ကြင္းနဲ႔ ကယ္လိုရီတန္ဖိုးခ်င္းတူတဲ့ ၾကက္ဥ (၂) … Read more
အပျိုလေးတွေဖြစ်ရက်နဲ့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျင်္ားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အေကြာင်းရင်း (၅) ချက် ခုနောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်ရေးပြဿနာ တော်တော်များများမှာ အပျိုလေးတွေက ဗီလိန်ဖြစ်နေတာကို အားလုံးလည်း တွေ့မြင်ရမှာပါ။ဘာကြောင့် အပျိုတစ်ယောက်က ရုပ်ရည်လည်းရှိရက်သားနဲ့…. ပညာအရည်အချင်းလေးလည်း ရှိရဲ့သားနဲ့ အိမ်ထောင်သည် ယောကျ်ားကိုမှ သိက္ခာအကျခံပြီး တွဲနေရလဲဆိုတာ အားလုံးသိချင်နေတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကိုတော့ အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့ ယောကျ်ားမှန်းသိနေလို့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ယောကျ်ားတစ်ယောက် ဖောက်ပြန်ချင်စိတ်ရှိနေတယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိကြပါတယ်။သူတို့ဖက်ကချစ်နေရင်တောင် ဒီတစ်ယောကျ်ားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်မယ့်သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ရှေ့ဆက်တိုးလေ့ မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျ်ားတစ်ယောက်က ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ သူကိုယ်တိုင်က ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ရှိလို့ဆိုတာကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ (၂) ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်လို့ အိမ်ထောင်သည်ယောကျ်ားကိုမှ စွဲလန်းကြရတဲ့အကြောင်းရင်း (၅) ချက်အိမ်ထောင်သည်ယောကျ်ားတွေက ဖြတ်သန်းလာတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေအရ ပိုပြီးတည်ငြိမ်ကြသလို၊ ပိုပြီးတော့လည်း ရင့်ကျက်ကြပါတယ်။ မိသားစုကို ကျွေးမွေးပြုစုနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပြင် တည်ငြိမ်တဲ့ အသွင်အပြင်၊ ရင့်ကျက်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေက … Read more
သင့်ရှယ်ရာတစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ
သင့်ရှယ်ရာတစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ “နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းနှင့်ပန်းနာရင်ကျပ်အတွက်ဆေး” တစ်နေ့ ခင်မင်ရင်းနှီးနေသော အမတစ်ယောက်မှ … … မောင်လေးစိုင်းမင်းသန့်မင်းကတိုင်းရင်းဆေးနည်းတွေတင်နေတာမို့ အမတို့မိသားစု လက်တွေ့ဆေးနည်းလေးပြောပြပါ့မယ် … ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အများအတွက်အကျိုးရှိတာပေါ့အမ ကုသိုလ်ရတာမို့ ပြောပြပါခင်ဗျာ … အမရဲ့ အဖေက နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါဖြစ်နေတာပါ အမက ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်တယ် ။ အာ့နဲ့ ပင်စိမ်းပင်နဲ့ရောဂါ ( 40 ) ဖတ်မိပြီး ပင်စိမ်းပင် ကလည်း အရံသင့်ရှိတာနဲ့ လက်တွေ့ဆေးအဖြစ်အသုံးပြု လိုက်တာ ! ပုံထဲကအတိုင်းပဲ အမရဲ့ အဖေရောဂါစဖြစ်တော့ အသက် ၆၇ – ၆၈အရွယ် လူကပိန်ပြီး ရင်ဘတ်ကအောင့် လူကနည်းနည်းလှုပ်လည်းမောတယ် ။ ပင်စိမ်းပင်ဆေးသုံးစွဲပြီး နှစ်လအကြာ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါနဲ့ အရင်လို ရင်ဘတ်အောင့်တာ မောတာတွေ မရှိတော့ဘူး … Read more